Wanga Abazondayo? Mhlawumbe Kuthande Abathandi Bakho! | Martech Zone
Wanga Abazondayo? Mhlawumbe Kuthande Abathandi Bakho!
ULwesithathu, April 15, 2015 NgoMsombuluko, Ephreli 20, 2015 Douglas Karr
Inkulumo eyisihluthulelo kaJay Baer ingenye yezinto ezinhle engake ngazibona eSocial Media Marketing World. UJay uxoxe ngencwadi yakhe ezayo, Hug Abazondayo. Isethulo sakhe besisihle futhi sahlekisa ngocwaningo oluthile olumangazayo kusuka UTom Webster nethimba lakhe lokuthi ukutshalwa kwezimali ekuxazululeni izikhalazo ngokushesha nangamasu kuzolikhulisa kanjani ibhizinisi lakho.
Isethulo sikhuluma ngezibonelo ezithile ezinhle zezinkampani eziphendula izikhalazo nokuthi lilunge kanjani ibhizinisi.
Ngingumuntu ongabazayo. Empeleni, ngonyaka owedlule eSocial Media Marketing World ngenza isethulo lapho ngathatha khona izinkampani eziyiphutha ezinkudlwana ezinkundleni zokuxhumana futhi ngafakazela ukuthi akukho nelilodwa kula maphutha elinomthelela omude, omubi ezinkampanini ezizenzileyo.
KuFacebook muva nje, uJay wabelane nabanye ngokubona kwakhe ngenkonzo yezindiza futhi ngasheshe ngakhunjuzwa ngale ngxoxo emangalisayo phakathi kosomahlaya ULouis CK futhi UConan O'Brien.
Ngenkathi ngimangazwa ubuchwepheshe obumangalisayo obutholakala ezandleni zabathengi kulezi zinsuku, ngibuye ngidumale nsuku zonke ngesigubhu esiqhubekayo senkampani esishaya engisibona ku-inthanethi.
Ingabe i-Apple Kufanele Ibagone Abazondayo?
Isibonelo esihle engingakhuluma ngesandla sokuqala yi-Apple. Ngingumlandeli omkhulu we-Apple. Bengingomunye wamacala wamantongomane abeka i-alamu yakhe nge-3AM EST futhi ngathenga iqoqo lokuqala lama-Apple Watches. Angisakwazi ukulinda ukuyithola ezandleni zami.
Funda ku-inthanethi futhi kunenhlokomo ezwakalayo yabachwepheshe, ama-blogger, nabazonda i-Apple abazonda iwashi. Zikhona yonke indawo… futhi awukho nowodwa umbono wazo onendaba nami. Futhi angicabangi ukuthi eminye yemibono yabo kufanele ibaluleke ku-Apple. Kubiza kakhulu, ukungabi bikho kwezinto ezintsha, ikhwalithi nezinkinga zejubane… zonke izikhalazo ezivela kubazondayo. Hheyi abazondayo… isigidi sithengiswe ngosuku futhi manje ku-oda langemva kukaJuni. Abazondayo bebengayi yi-Apple Watch noma kunjalo, kungani ubanga?
DK New Media Umlilo Uzonda Futhi Uthanda Abathandi Bawo
Ngonyaka odlule, ngemuva kokululama onyakeni owawudungekile, saqala ukululama. Izinkinga zethu eziningi beziyiphutha lami. Sanweba ngaphandle kwezinsizakusebenza ezidingekayo sabe sesizama ukuvala igebe. Esikhundleni sokusebenza kanzima ukukhomba amakhasimende afanele, sithathe cishe wonke umuntu ocela usizo lwethu… futhi bekuyiphupho elibi. Silimaze ngisho nokuklama i-infographic mayelana ne- izinhlobo zamakhasimende esasivutha ngawo.
Samukele ukusebenza nenqwaba yamakhasimende ayehlukumeza futhi eshibhile. Abasibhekanga njengozakwethu, basibheka njengenselelo yokukhama isenti ngalinye lokugcina. Angizange ngibange abazondayo, sabaxosha.
Manje sibeka umzamo omkhulu ekwenzeni amakhasimende ethu afaneleke futhi siqinisekise ukuthi siyalingana ngokwamasiko futhi siyakholelwa ukuthi singaphumelela ekusebenzeni nawo. Umehluko ubusuku nemini. Sibe nonyaka wethu omuhle kunayo yonke, sandisa okwenzekayo, sijabule, futhi nomsebenzi esiwenzayo ungcono kakhulu kunangaphambili.
Ukuzama ukujabulisa abasizondayo kwakukhathaza. Futhi-ke asisazami. Uma othile esiphatha kabi, simane siphendule ngokwethembeka kubo - noma ngabe kusesidlangalaleni noma kuyimfihlo. Kwesinye isikhathi sivala izimpondo, kepha isikhathi esiningi simane sihambe. Sidinga ukugxilisa ukunaka kwethu kumakhasimende asithandayo, hhayi lawo angasoze asiqasha, asincoma, futhi ahlala phansi asithathela amabhodwe.
Wanga abazondayo? Umzamo omkhulu kakhulu. Ngincamela ukuthanda izithandwa zami. Yibo abasabalalisa izwi, bandise ukuhlangana kwabo nathi, basitholele amakhasimende amaningi, futhi bakwazise lokho esibenzela kona.
Ingabe Abaphumelele Bayabekezelela Abazondayo?
Uma ngibheka ibhizinisi, ezemidlalo, ezombusazwe, noma omunye umholi ophumelelayo - cishe njalo ngibona abantu ababanganaki ababazondayo futhi bazikhethela impumelelo yabo. Ukwehluleka engikubonile kube ngabantu abalalela wonke umuntu, bazama ukujabulisa wonke umuntu, futhi abaze bahlangabezana nokulindelwe okungenzeki okubekwe yimakethe.
Uma ngibheka izimboni ezinjengeselula, ikhebuli, izinsiza, izindiza nezinye… Ngibona abathengi benza izimfuno ezingaphezulu kwenani lomkhiqizo noma insizakalo abazimisele ukuyikhokhela. Futhi uma bengakutholi abakufunayo, baphonsa i-hissy fit online ukuze ibonwe ngumphakathi. Futhi uma inkampani izama ukubasebenzela kangcono futhi ingeze imali ethe xaxa kwisikweletu sabo, abathengi bayayikhokhela ikhambi elilandelayo lezindleko eziphansi.
Ukuqagela kwami ​​ukuthi uma izindiza ezi- ______ ziphatha amakhasimende abo kakhulu, ngabe basapakishe izindiza eziya endaweni yabo elandelayo egcwele amakhasimende asebenzise usesho lwe-inthanethi ukuthola intengo ephansi kakhulu. Angicabangi ukuthi iningi labazondayo linendaba nenkampani yezindiza, bazokhononda noma ngabe kunjani. Futhi izindiza eziningi zinezikhungo ezibekiwe lapho cishe kungenakwenzeka ukubaleka kumkhiqizo wazo noma ngabe ubukhathalela.
Ufuna Uthando? Khokha!
Ngakolunye uhlangothi, uma ngikhokhela isigaba sebhizinisi, ngithenga izimoto zikanokusho, ngisebenzisa imali kwiwaranti enwetshiwe noma umshuwalense, noma ngikhokhela ikhompyutha ephathekayo ebiza kakhulu, angikaze ngibe nezinkinga abanye abahlangabezana nazo. Indawo yokuphumula yabahambi baseDelta - ngokwesibonelo - iyamangaza futhi ungathenga ukufinyelela kuhambo oluningi ngokwengeziwe. Ngenkathi wonke umuntu elinde umenzeli wamathikithi, ngithatha isiphuzo futhi ummeleli weDelta wehlise igama lami wabe eseqala ukwenza isenzo sokungenza ngihambe. Akukho siphithiphithi, akukho mqondo… Mina nobabili ngiwubonge futhi ngawukhokhela.
Ukukhokha okwengeziwe, ngithola insizakalo emnandi, cishe azikho izikhathi zokulinda, nezimpendulo ezisheshayo. Uma ngizofuna okungcono kakhulu, kufanele ngizimisele ukukukhokhela. Uma ngingenayo imali yokuthenga okungcono kakhulu, kufanele ngeneliswe yilokho okusele.
Ungangizwa kabi. Ngizobeka umzamo oqotho wokuzama ukuphenya ikhasimende elingajabule. Ngikweleta okungenani okungako ngoba benze utshalomali nathi. Kepha uma behlupheka noma bengiphatha kabi mina noma abasebenzi bethu, akekho umuntu onesikhathi sedatha! Ngicabanga ukuthi kunamaphesenti abalulekile abazondayo online izinkampani okufanele zizitshele ukuthi zivale i-bugger.
Jay… usuqedile umsebenzi wakho.
Tags: ucwaningo lwe-edisonzonda abazondayoJay Baerthanda abathandi bakhoizikhalazo onlineUkubuyekezwa okuku-inthanethiimizwatom webster
Ungawulinganisa Kanjani Umphumela Wokusesha Kwe-Algorithm?
Ngabe i-Snap ingaba yisinyathelo esilandelayo ohambweni lomthengi wakho?
Ngo-Apr 15, i-2015 ku-10: i-23 PM
Okuthunyelwe okuhle uDoug, ngiyabonga.
Izinto ezimbalwa. Angikhulumi ngamaphutha amakhulu nangezinkinga ezibangelwa imithombo yezokuxhumana. Asikho nesisodwa isisho embhalweni oyisihluthulelo esasinjalo, futhi asikho nesinye sezibonelo ezisencwadini esizoba yiso, noma. Engikhuluma ngakho ukuphawula okungekuhle kwansuku zonke, izikhalazo, ukubuyekezwa kwezinkanyezi ezi-1 nezingu-2 ukuthi izinkampani cishe zonke osayizi nezinhlobo ziphendula ngokungahambisani, uma kunjalo.
Ingabe kuthatha umsebenzi omningi ukuphendula zonke izikhalazo, ngaso sonke isikhathi, kuzo zonke iziteshi? Kunjalo. Kepha ucwaningo esilwenzile lukhombisa ukuthi ukwanda kokumelwa kwamakhasimende lapho uphendula isikhalazo kukhulu kakhulu, futhi nokwehla kokumelwa kwamakhasimende lapho uziba ukunganaki kukhulu kakhulu.
Ngabe ezinye izinkampani zingakwazi ukungazinaki imibono nezikhalazo ezingezinhle? Yebo. Kepha lezo zinkampani azivamile.
Futhi ngifuna nokucacisa ukuthi incwadi kadokotela ethi Hug Your Haters AKUKHO ukuthi ikhasimende lihlale liliqiniso. Akulona iqiniso, futhi akuhlakaniphile ukwenza ibhizinisi lakho ngaleyo ndlela. Umuthi kadokotela esikhundleni sokuthi ikhasimende lizwakala njalo. Umehluko omkhulu. Eqinisweni, ngenkathi ngingalingenanga ubumbumbulu enkulumweni, isincomo sami ukuthi ungalokothi uphendule ngaphezu kokuphindwe kabili entanjeni eyodwa / isikhalazo / okuthunyelwe kwebhulogi, njll. Ukunciphisa ukubuya ngaleso sikhathi, ngokuvamile.
Okunye okubalulekile ukuphawula ngumehluko phakathi kwabazonda i-Offstage abakhononda ngasese, nabakwa-Onstage Haters abakhononda esidlangalaleni. Ukhiye ukuqonda ukuthi owokuqala ufuna impendulo, kanti owokugcina ufuna izilaleli. Ukungabi namdlandla kungumdlalo wesibukeli manje, futhi ngenkathi (kufanele) ufuna ukutshela ikhasimende elihlukumezekile (noma elicasulayo) ku-F-OFF iqiniso ukuthi ikakhulukazi ngabakwa-Onstage Haters, ingozi yangempela ayikho ekulahlekelweni kwalelo khasimende, kepha kunalokho kulokho ababukeli abakucabangayo ngenkampani yakho nangamagugu akho.
Ngo-Apr 15, i-2015 ku-10: i-48 PM
UJay - ngibonga kakhulu ngokuthatha isikhathi sakho ukucacisa. Sengivele ngi-ode amakhophi ambalwa encwadi yabasebenzi bethu ngoba lolu lwazi luzobaluleka kumakhasimende ethu.
Ngo-Apr 20, i-2015 ku-12: i-02 PM
Bengihlala ngicabanga ngakho ngombono olula wokuthi “ikhasimende alihlali lilungile ngaso sonke isikhathi,… kepha yilo ikhasimende”. Ngakho-ke, lokho kungibangela ukuba ngehlise ijubane futhi ngiphendule ngokufanele - ngifuna ukuqonda ukuthi iyini inkinga yangempela nokuthi yini engaba yimpendulo nesisombululo esifanele. Lokho kuqondise imizamo yami "yokwanga ozondayo."
Ngo-Apr 20, i-2015 ku-2: i-19 PM
Ngeqiniso angisiye umlandeli, uCurt. Ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi abantu bangamajeje nje futhi nokuziphatha kwabo okungafanele akufanele kushwelezwe. Kulula ukusho kunokuba kwenziwe lapho ungumnikazi webhizinisi ngicabanga ukuthi!